Ny fomba sarotra - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny fomba sarotra
“Satria Izy mihitsy no nanao hoe: “Tsy te-hiala aminao tokoa Aho, ary tsy te-hiala aminao tokoa” (Hebreo 13:5 ZUB).
Inona no ataontsika rehefa tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana raha tsy misy ny ahiahy sy ny olana ateraky ny fiainana. Indraindray ireny saika tsy zaka. Toa tsy rariny indraindray ny fiainana. Fa maninona no izany? Tianay ho fantatra izany. Loza tsy ampoizina be no manjo antsika ary manontany tena izahay hoe inona no dikan'izany. Tsy zava-baovao izany, feno fitarainana ny tantaran'ny olombelona, ​​saingy tsy azo atao ny mahatakatra izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Fa rehefa tsy ampy fahalalana isika dia omen'Andriamanitra zavatra ho valiny, izay antsointsika hoe finoana. Manana finoana izay tsy ananantsika ny topy maso sy ny fahatakarana feno. Raha manome finoana antsika Andriamanitra, dia mandroso amin'ny fahatokisana isika, na dia tsy mahita, tsy mahazo na miahiahy ny amin'ny fandehan'ny raharaha aza isika.
Rehefa miatrika zava-tsarotra isika dia omen’Andriamanitra finoana fa tsy voatery hitondra ny enta-mavesatra irery isika. Rehefa mampanantena zavatra Andriamanitra, izay tsy mahay mandainga, dia toy ny hoe efa tena nisy izany. Inona no lazain’Andriamanitra amintsika momba ny fotoan-tsarotra? Mitantara amintsika i Paoly ao 1. Kôrintianina 10:13 “Tsy mbola nisy fakam-panahy nahazo anareo afa-tsy olombelona ihany; Fa mahatoky Andriamanitra, izay tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo;
Izany dia tohanan'ny 5. Genesisy 31, 6 sy 8: “Mahereza sy miorena tsara, aza matahotra na manahy azy! Fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao; tsy hanaisotra ny tanany aminao izy ary tsy handao anao. Fa Jehovah no mandeha eo alohanao; homba anao izy ka tsy hanaisotra ny tànany aminao na handao anao; aza matahotra ary aza misalasala.
Tsy maninona izay alehantsika na izay alehantsika, tsy ataontsika irery izany. Ny tena marina dia miandry antsika Andriamanitra! Izy no nialoha antsika hanomana lalana ho antsika.
Andao hahatakatra ny finoana omen'Andriamanitra antsika ary andeha isika hiatrika amim-pahatokisana ny zavatra rehetra omen'ny fiainana.
Nataon'i David Stirk